Fiainana antoko : 15 taona ny Tim any Paris | NewsMada
Fiainana antoko : 15 taona ny Tim any Paris
Tsy eto an-toerana ihany. Hanamarika ny faha-15 taony koa ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim), any Paris, Frantsa. Hotantarehina, anio, any an-toerana izany amin’ny alalan’ny hetsika samihafa, ialohavan’ny lahateny samihafa. Efa nigadona any Frantsa, omaly, ny mpanorina ny antoko, Ravalomanan Marc, sy ny depiote sady mpitondra tenin’ny antoko Tim, Randrianarisoa Guy Rivo.
Tombanana fa ho voaresaka amin’izany ny hiatrehana ny fifidianana amin’ny 2018. Eo koa ny fifampitana ny vaovao misy sy marina eto amin’ny firenena. Manampy izany ny momba ny fanakatonana ny orinasa AAA Tiko ao Andranomanelatra, Antsirabe.
Ankoatra izany, norombahin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra kosa ny loka momba ny fambolena an-tanàn-dehibe “Pacte de Milan”, mitentina 15 000 euros. Nandritra ny fivorian’ireo ben’ny Tanàna 400 maneran-tany sy ny manampahaizana ary ireo solontenan’ny tanàn-dehibe samihafa nivory tany Valence, Espagne, ny nahazoana izany.
Natokana ho an’ny tanàn-dehibe, toy ny any Fianarantsoa, Mahajanga, ary Moramanga ho fampiroboroboana ny fambolena an-tanàndehibe io vola io. Hiantsoroka ny fitantanana izany koa ny CUA, amin’ny alalan’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao, noho ny traikefa efa ananany. Tompon’ny sonia momba ny dinan’i Milan amin’ny vina “Nourrir les villes”, ny volana avrily lasa teo teto Antananarivo, rahateo ny tenany.